PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-15 - Ikhansela laseDannhauser selokhu lakhethwa alikaze lizethule emphakathini
Ikhansela laseDannhauser selokhu lakhethwa alikaze lizethule emphakathini
semathubeni amakhulu okuhlaselwa yizifo eziyingozi okubalwa kuzona ushukela, izinso, umdlavuza, esenhliziyo nezinye eziningi.
Phezu kwalokho uma kubhekwa manye amazwe alapha e-Afrika afana ne-Egypt, anabesifazane abanesibalo esincane sabakhuluphele njengoba leli lizwe likaFaro linesibalo esifika ku-35% sabakhuluphele.
Emazweni aseMpumalanga kuyavela ukuthi iBangladesh neVietnam bashaya ngo-1% wabesifazane ZININGI izindlela zokunyakazisa umzimba ezingasiza ukugwema ukukhuluphala.
Umuntu angahamba amabanga amade, ukuzivocavoca, ukusebenzisa izitebhizi kunokuthatha ikheshi, ukubhukuda, iyoga nokudlala, kungaba wukusebenzisa ibhayisikili kunokuthatha imoto nokuzibophezela ekujimeni.
Ukudla ngendlela ehlelekile nenempilo:
Umzimba womuntu uyadinga ukuthi ubenesilinganiso esikahle sokudla okunomsoco.
Kulokho kudla kubalwa izithelo, imifino, inyama, amakinati, ubisi, ukolweni nokunye okungagcina umzimba uphile saka.
Kubalulekile ukuthi okungenani ngesonto uzikale isisindo ukuze ube njengembangela yalokhu, kodwa ukungazivocavoci nokudla noma yini, kubalwa njengezinye zezimbangela.
Lo mbiko wokukhuluphala kwabesifazane ubukeka usungenele nasezinganeni. Umbiko weWorld Health Organization kuleli sonto, udalule ukuthi izingane ezikhulayo njengamanje zibukeka zizokhula zigcine zinenkinga efanayo ngokuhamba kwesikhathi uma kungukuthi akukho sinyathelo esithathwayo ukushintsha indlela yokuphila.
Lokhu kungenxa yokuthi isibalo sezingane ezineminyaka esukela kwemihlanu kuya kwengu-19 ezikhuluphele emhlabeni jikelele, sinyuke kakhulu. Lokhu sekwenze ongoti babone ukuthi kothi kushaya u-2022, zibe seziziningi ngokweqile izingane ezikhuluphele, nokuyisimo esingesihle.
Embikweni osanda kukhishwa ngabalesi sikhungo, lokhu kukhuluphala okubikwayo kwandisa isibalo sabantu abashesha ukufa.
“Zilinganiswelwa ku-2 billion izingane nabadala abagcina MHLELI: Kwelakho elifinyelela ezizweni zonke ngicela ungilobele lolu daba.
Kuthi uma kuza ukhetho bafike abantu ngobuningi babo basithembise izulu nomhlaba nakho kone okukuwo konke okujika kube yizethembiso ezingafezwa.
Ngamehlo ami Mhleli angilazi ikhansela (Mthunzi Mkumane) lasesigcemeni 1 eSweetwaters nesiqiniseko sokuthi isisindo sakho sikahle.
Kulapho uzokwazi khona uma ngabe isisindo sakho sidlulele.
Yehlisa ukudla okuyizicoficofi
Yehlisa ukudla okunoshukela, iziphuzo ezihlohlozayo nokalakateni. Gada nokudla okwakhiwe (processed) njengopholoni njalo njalo nokudla okudayiswa sekuvuthiwe kwasezitolo.
Ukuphuza amanzi kubaluleke kakhulu. Abezempilo bancoma ukuthi umuntu aphuze okungenani amagilasi ayisishiyalombili ngosuku.
Ngemuva kokudla kuhle ukwehlisa ngawo amanzi afudumele ngoba ashisa amafutha. Nokuphuza amanzi ngaphambi kokudla kwenza usheshe usuthe.
Kuhle nokuzijwayeza ukuzenzela ngezithelo okubalwa kuzoba amawolintshi, umango, ubhanana nezinye. begula bephathwa yizifo ezahlukene ezibangena kalula ngenxa yokukhuluphala,” kusho umbiko.
Ubufakazi balokhu wukushona kwabantu abalinganiselwa ku-3.4 million, okubikwa ukuthi kwenzeke ngo-2010. Imbangela yakho kube wukukhuluphala nokuyinto, kwabanye ebingagwemeka ngokudla ngendlela enempilo nokuzivocavoca.
Lolu cwaningo luveza ukuthi kuningi abantu abangakwenza ukuqaphela ukuthi isimo sempilo yabo sihlelekile futhi ngesinempilo yini.
UDkt Amran Maharaj uthe abanye abantu bayayiyekelela impilo yabo bajahe ukudla izibiliboco.
“Ayikho into ebaluleke njengokubheka impilo yakho ukuze uhlale ungumqemane. Ukuyinakekela kungenza umuntu aphile isikhathi eside, aphuze ukuguga futhi abengogqigqa kodokotela ngenxa yezifo.
Ukudla noma yini nokujaha ukuthi uzokwehlisa ngokusebenzisa indlela yokuphalaza, noma ukusebenzisa amaphilisi akusizi, kunalokho kunomthelela ongemuhle,” usho kanje.
Ugxeke ukuzicima kakhulu ngezicoficofi, iziphuzo ezihlohlozayo nenyama eyosiwe njengezinye izinto ezinemithelela kule nkinga.
Uthe phezu kokuba kwabanye ukukhuluphala kwabo kudalwa wukudla ngale ndlela engahlelekile, kodwa abanye bakhulu ngokwendalo. Yize kunjalo, kodwa kubalulekile ukudla kahle nokunakekela impi kuhambisane nokunyakazisa igazi.
Unxuse abazali ukuba baqaphe ngelokhozi okudliwa yizingane ezikoleni.
“Kungcono umzali enzele ingane isikhafutini azokwazi yena ukusifaka ukudla okunempilo, aphinde ayikhuthaze ukuba idlale.” (Dannhauser) selokhu lakhethwa alikaze lizethule emphakathini sibeke izimvo nezimfuno zethu kulona.
Ngisho nane-ward committee (Sibonelo Buthelezi) eyabekwa ayisisizi ngalutho.
Uma sibiza imihlangano siyicela ayizi lapho ngikhuluma nje sivocwa yimvula, siyibize, ayaze yazihluphe ngathi.
Okungiphatha kabi ukuthi sihambe singqongqoza eminyango singatholi sizo olufanele futhi akekho nje umuntu namunye ozihluphayo ngathi nendawo esiyakhele sifana nabangekho sikhona.
Namanje ngisaphinde ngiyacela nathi asinakwe phela njengalokhu benza uma bezoncenga amavoti ethu nomake sitshelwe ukuthi singabakuphi nezwe ngoba eMzansi ungathi asisibo abakhona.
Nozipho Kubheka ESWEETWATERS
UMBIKO uveza ukuthi baningi abesifazane abakhuluphele eNingizimu Afrika uma kuqhathaniswa nabakwamanye amazwe Isithombe: SIGCINIWE